Soo-saareyaasha Dhalada Sharaabka & Alaab-qeybiyeyaasha - Warshad Dhalo Sharaab Shiinaha
Dhalooyinka ugu waaweyn ee caanaha dhalada lagu iibiyo
Khibraddeena shaqo ee barwaaqada leh iyo xalalka fekerka leh, hadda waxaa naloo tixgeliyey inaan nahay badeecad lagu kalsoonaan karo. 350ml weel fuud ah oo madhan, dhalooyinka caanaha dhalada ah ayaa ah badeecadayada iibka kulul, waxay leeyihiin ilo badeecado muhiim ah sidoo kale sicirka ayaa ah faa iidadeena Ku soo dhowow inaad wax ka weydiiso badeecadeenna. Muunad: Bixiyay OEM / ODM: Midab Koofiyeed oo La Aqbali Karo: Qaab Midab Loo Qaatay: Flat, wareegsan ama la habeeyay Hubinta tayada: Baadhitaanka iswada si loo hubiyo tayada
Koobka dhalada dhalada ah oo leh caws
Waxaan bixinaa muunad bilaash ah oo loogu talagalay tixraaca macaamiisha, oo leh khibradeena wax soo saar ee hodanka ah, alaabooyin tayo sare leh iyo xalal, iyo adeegga iibka ka dib oo qumman, jum wuxuu helay sumcad wanaagsan wuxuuna noqday mid ka mid ah shirkadaha caanka ah ee ku takhasusay taxanaha wax soo saarka. xiriir ganacsi kaa dhexeeyo oo aad ku daba-gasho wax-wada-qabsiga. Waxaan hoos u dhignay kharashka ku baxa, kharashyadu waa kuwo macquul ah oo dheeri ah, waxaan ku guuleysannay taageerada iyo xaqiijinta macaamiisha cusub iyo kuwii hore. Fikraddeenu waa inaan ka caawinno macaamiisha bixinta adeegyadeena ugu daacadsan, iyo wax soo saarka saxda ah.
Dhalada dhalada casiirka dhalada cabitaanka dusha
Cab dhalada galaaska leh caws
Waxaan hoos u dhignay kharashka ku baxa, kharashyadu waa kuwo macquul ah oo dheeri ah, waxaan ku guuleysannay taageerada iyo xaqiijinta macaamiisha cusub iyo kuwii hore. Fikraddeenu waa inaan ka caawinno macaamiisha bixinta adeegyadeena ugu daacadsan, iyo wax soo saarka saxda ah. Iyada oo tiknoolajiyaddu tahay udub-dhexaadka, horumarinta iyo soo saarida alaab tayo sare leh iyadoo loo eegayo baahiyaha kala duwan ee suuqa. Fikraddan, waxay sii wadi doontaa inay soo saarto alaabooyin leh qiime sare oo si joogto ah loo hagaajiyo xalalka, waxayna siin doontaa macaamiisha xalalka iyo adeegyada ugu fiican! Waxaan haynaa koox injineer sare ah oo ka shaqeeya warshadaha iyo koox wax ku ool ah dhanka cilmi baarista. Waxaa intaa dheer, waxaan haysanaa wax kabadan 26 khadadka wax soosaarka aqoon isweydaarsiga, sidaa darteed, waxaan la kulmi karnaa weydiimo kala duwan oo ka imanaya macaamiisha kala duwan. Kusoo dhawow si aad u hubiso macluumaad dheeri ah oo ku saabsan xalalkeena oo nala soo xiriir.
Dhalada dhalada ah ee juuska leh caws
Qabashada dusha: Decal iyo astaanta Sharaabka Guud ahaan waxaan ku dhegannahay aragtida ah "Tayo Aad U Horraysa, Haybad Sare". Waxaa si buuxda nooga go'an inaan u adeegsano dukaamadeena xalal tayo sare leh oo qiimo sare leh, soo dejin deg deg ah iyo adeegyo khibrad u leh macaamiisha. Alaabtayadu waxay soo jiidayaan dhalada cabitaanka galaaska, dhammaan noocyada dhalooyinka quraaradaha ah, dhalada khamriga, baaquli dhalada ah, iwm. Waxaan haynaa koox injineer sare ah oo ka shaqeeya warshadaha iyo koox wax ku ool ah dhanka cilmi baarista. Waxaa intaa dheer, waxaan haysanaa wax kabadan 26 khadadka wax soosaarka aqoon isweydaarsiga, sidaa darteed, waxaan la kulmi karnaa weydiimo kala duwan oo ka imanaya macaamiisha kala duwan. Kusoo dhawow si aad u hubiso macluumaad dheeri ah oo ku saabsan xalalkeena oo nala soo xiriir.
Dhalada Khamriga Khamriga Dhalada Beer Dhalada dhalada ah iyo dhalada cabitaanka fudud ˴ dhalada wax lagu shubo jar Mason weel waa sheygayaga caanka ah. Dhammaan alaabooyinka ayaa ka gudbi kara imtixaanka FDA, LFGB iyo DGCCRF. Cagaar, ilaalinta deegaanka iyo nolol caafimaad leh oo aadamuhu had iyo jeer waxay ahaayeen jihada horumarkayaga. Kooxda qaabeynta xirfadeed waxay la kulmi karaan shuruudaha daabacaadda, xirxirida, nashqadeynta alaabta. Mabda'eenu waa: hal hawlgal saldhig, buuxinta baahidaada, bixinta xal iyo gaaritaanka guul-guul.
Cabitaanka dhalada galaaska leh caws
JUMP waa shirkad kooxeed leh khibrad 20 sano ah oo ku takhasustay soo-saarista maalinlaha ah noocyo kala duwan oo dhexdhexaad ah iyo heer sare ah oo lagu isticmaalo muraayadaha dhalada iyo dhalada quraaradaha Waxay ku taal gobolka dalxiiska xeebta - ShanDong, maadaama madaxa bariga ee New Eurasian Continental Bridge ， uu leeyahay dekedda caalamiga ah ee ugu weyn Shiinaha- QingDao Port, JUMP waxay leedahay goob juquraafi ah oo u gaar ah, taas oo u abuurtay xaalado dabiici ah oo wanaagsan ganacsiga caalamiga ah.
Cab cabitaanka dhalada galaaska leh caws
dhalada sharaabka leh daboolka fur
Logo: Calaamadda Macaamiisha La Aqbali Karo: Maareynta Dusha oo cad ama la habeeyay printing Daabacaadda shaashadda, dubista, daabacaadda, sandblasting lasting xardho ˴ electroplating iyo midab ku buufinta decal ˴ decal, iwm Isticmaalka Warshadaha: Cabitaanka, miraha, casiirka, biyaha, caanaha iwm Muunad Muraayad: Bixisay OEM / ODM: Midab Cap oo La Aqbali Karo: Qaab Midab Noocsan: Flat, Wareeg ama Shahaadooyin la habeeyay: FDA / 26863-1 Warbixinta Tijaabada / ISO / SGS Xirxirida: Sariir ama kartoon Goobta Asalka: Shandong, Hubinta Tayada Shiinaha: Aaladda iswada kormeer si loo hubiyo tayada Waxsoosaarka wax soo saar waa 800 milyan oo kumbuyuutar sanadkiiba Waqtiga la bixinayo 7 maalmood gudahood haddii alaab keyd ku jirto, haddii aad u baahato badiyaa gaarsiin bil gudaheed ama gorgortan
Naqshad caan ah oo ah dhalada cabitaanka sharaabka
Waxaan haynaa koox injineer sare ah oo ka shaqeeya warshadaha iyo koox wax ku ool ah dhanka cilmi baarista. Waxaa intaa dheer, waxaan haysanaa wax kabadan 26 khadadka wax soosaarka aqoon isweydaarsiga, sidaa darteed, waxaan la kulmi karnaa weydiimo kala duwan oo ka imanaya macaamiisha kala duwan. Kusoo dhawow si aad u hubiso macluumaad dheeri ah oo ku saabsan xalalkeena oo nala soo xiriir. Waxaan bixinaa muunad bilaash ah oo loogu talagalay tixraaca macaamiisha, oo leh khibradeena wax soo saar ee hodanka ah, alaabooyin tayo sare leh iyo xalal, iyo adeegga iibka ka dib oo qumman, jum wuxuu helay sumcad wanaagsan wuxuuna noqday mid ka mid ah shirkadaha caanka ah ee ku takhasusay taxanaha wax soo saarka. xiriir ganacsi kaa dhexeeyo oo aad ku daba-gasho wax-wada-qabsiga.
Warshadda si fiican u iibinta dhalada jucie dhalada ah
Iyada oo tiknoolajiyaddu tahay udub-dhexaadka, horumarinta iyo soo saarida alaab tayo sare leh iyadoo loo eegayo baahiyaha kala duwan ee suuqa. Fikraddan, waxay sii wadi doontaa inay soo saarto alaabooyin leh qiime sare oo si joogto ah loo hagaajiyo xalalka, waxayna siin doontaa macaamiisha xalalka iyo adeegyada ugu fiican! Waxaan haynaa koox injineer sare ah oo ka shaqeeya warshadaha iyo koox wax ku ool ah dhanka cilmi baarista. Waxaa intaa dheer, waxaan haysanaa wax kabadan 26 khadadka wax soosaarka aqoon isweydaarsiga, sidaa darteed, waxaan la kulmi karnaa weydiimo kala duwan oo ka imanaya macaamiisha kala duwan. Kusoo dhawow si aad u hubiso macluumaad dheeri ah oo ku saabsan xalalkeena oo nala soo xiriir.
Saliida Zeytuunka Iyo Khamriga Qamriga, Dhalo Saliid Cagaaran, Dhalo Saliid saytuun ah, Dhalada Saliida Saliidda ah ee 250ml, Dhalo Saliid saytuun ah, Jar Kaydinta Saliida Olive,